Kỹ thuật trồng Nấm Hoàng Đế bằng nhiều cách khác nhau | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ thuật trồng Nấm Hoàng Đế bằng nhiều cách khác nhau | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
I-Emperor Mushroom (i-milky mushroom) yaziwa njengeyona mushroom inkulu, inamandla nexabiso eliphezulu loqoqosho ukunceda ukwandisa ingeniso kumafama. Umsebenzi ukukhula amakhowa emperor Nangona indlela yahluke kakhulu, ikwafuna ukukhathalelwa ngononophelo kwimveliso ephezulu.
Ngaphambi kokuba ndiye kwisifundo se-mushroom, ndingathanda ukuphendula imibuzo edla ngokubuzwa ngolu hlobo lulandelayo:
1 Imibuzo edla ngokubuzwa malunga nokukhula kwamakhowa eemperor
2 Indlela yokukhulisa amakhowa eemperor
2.1 1, Unyango lweembumba zefungal
2.2 2, Ukutyala amakhowa
2.3 3. Ukhula njani
Imibuzo edla ngokubuzwa malunga nokukhula kwamakhowa eemperor
1, Ingakanani ingxowa ye-mushroom (isivuno)
Ngokuqhelekileyo amakhowa anobisi anesivuno esifanayo kwaye aphezulu kune-abalone engwevu.
Nangona kunjalo, uphawu lokuthumela ngaphandle kufuneka lusekelwe kwezi zinto zilandelayo:
Yintoni ubunzima besikhwama se-mushroom embryo (ubunzima be-substrate, okanye ubunzima bezondlo) ze-mushroom ekhulayo?
Ngenxa yokuba ngokomthetho wokuguqulwa kwamandla, ingakanani i-substrate eya kunika umlinganiselo ofanayo wemveliso (ithiyori ebalwa ngokugqibeleleyo), ngokuqinisekileyo, ngokwenene, ISISHWANKATHELO ESIPHAKAMILEYO SAMAKHOWA siya kufana ne-WEIGHT BACK OF BIG. Ngokwesiqhelo, i-1.2kg ye-embryo bag iyakukhupha i-0.5 ukuya kwi-1kg yamakhowa. I-1.9kg bag imalunga ne-1 ukuya kwi-1.5kg.
Isivuno siya kusekelwa kokusingqongileyo, indlela yokukhula, iimeko zemozulu, kunye nobume be-embryo. Abathengi bam abakhulela ekhaya basokola kakhulu kokusingqongileyo kunye nendlela yokutyala nokubanyamekela.
2, Kutheni kukho amaqoqo amakhowa amakhulu kune-10kg
Amakhowa anobisi okanye ezinye iifungi ezigqume umhlaba (okanye amakhowa akhuliswe ngokugquma umhlaba) ane-1 okanye isilika enokuthi idityaniswe ukusuka kwi-embryo bag ukuya kwenye ukuphakamisa iqela elifanayo le-mushroom, ngoko ngoku iingxowa ezili-10 ze-embryos (substrate) malunga ne-12 ikg).
Ngoko ke, kuyinto eqhelekileyo ukuvelisa amakhowa anobunzima obuyi-8 ukuya kwi-10 kg. Emva koko ndiyahlula-hlula kwiindlela ezi-2 zokukhula, eziya kunika iindidi ezimbini zamakhowa ngokobunzima:
Ukukhula kwamakhowa kwiingxowa: Xa ukhula kwiingxowa, amakhowa adla ngokuba mancinci, malunga nobukhulu bamathanga enkukhu ndidla ngokubona. Ngenxa yokuba ubunzima besikhwama se-embryo ngokuqhelekileyo abunzima.
Ukukhula kwiitreyi, iibhedi zokugquma: Xa sisusa iibhegi, sikrazula iingxowa zeplastiki zangaphandle, zilungelelanise iingxowa zee-embryo zigudlana omnye komnye, zigqume ngomhlaba, i-mycelium iya kuthungelana ukusuka kwesinye ingxowa yeembumba ukuya kwenye ukuze yenze ibhloko xa inobisi. amakhowa akhula abe ngamaqela kwaye abe makhulu, angakhula abe ngaphezu kwe-10kg.
3, Ke ingaba i-1 ibhegi yamakhowa iza kuphuma kangaphi?
Lo mbuzo kunzima ukuwuphendula ngokuchanekileyo kuba siya kuxhomekeka kwimeko nganye. Umzekelo:
Isondlo engxoweni yi-100%.
Ukuba sivuna xa ama-mushroom makhulu, ubukhulu obukhulu budla malunga ne-80% yesondlo kwisikhwama, ngoko ke loo ngxowa inokuphuma kwakhona kunye ne-1 indlebe encinci ye-mushroom kuba kukho i-20% kuphela yesondlo esisele kwisikhwama. inkulu kakhulu.
Ukuba sivuna amakhowa xa besebancinci, kuphela i-20% yezondlo ezikwingxowa ziya kusetyenziswa, ngoko isikhwama sinokukhutshwa ngokuphindaphindiweyo kude kube zonke izondlo ezisesikhwameni zisetyenziswe.
(Ndiyitolika ngendlela yokuba wonke umntu aqonde, kodwa ngokutsho kwee-agronomists, nam ngokwam ndinomdla, lol).
Ngoko ke, amakhowa amakhulu okanye amancinci, mangaphi amaxesha avunwayo ngokuxhomekeke kwindlela esikhula ngayo kwaye sikhethe iinkukhu, lide kuba sinethemba lokuba usapho lwethu luyaluqonda kakuhle ubisi ukuze singabhideki kwaye sibhideke, hehe. Ke ngoku wonke umntu ukhethe indlela yokuzityala, akunjalo ???
(Imifanekiso ekweli nqaku, amaqhoshana abolekwe kwiqela le-Milky Mushroom likaMalume waseThai uPackdee tong-on, kunye nefama ka-Anh Anh’s Milky mushroom eLong An, ethathwe kugoogle kunye neminye imifanekiso yam ndikhula kwaye ndithatha iifoto zam).
Indlela yokukhulisa amakhowa eemperor
1, Unyango lweembumba zefungal
Emva kokufumana iimbumba ekhaya, kufuneka wenze la manyathelo alandelayo ngokukhawuleza:
Inyathelo 1: Susa ingxowa yamakhowa
Ukuthutha amakhowa ngokulula, ivenkile ihlala ipakisha iingxowa kunye neeplastiki. Nangona kunjalo, amakhowa nawo kufuneka aphefumle, kwaye ukushisa okuphezulu akufanelekile kwi-mycelium, ngoko xa ufumana amakhowa, khumbula ukususa ukupakishwa kwaye ushiye amakhowa kwindawo epholileyo ngokukhawuleza.
Inyathelo lesi-2: Jonga i-embryo yekhowa
Ukuba ingxowa ye-silk embryos ayizange ibaleke ukuya ezantsi engxoweni: Zisa ingxowa yeembumba ze-mushroom kwindawo epholileyo (akukho kukhanya kwelanga ngqo), musa ukunkcenkceshela, ungenzi nto iintsuku ezimbalwa, i-mycelium iya kubaleka ukuya ezantsi. yebhegi.
Inyanda yeembumba zesilika ivaliwe, imhlophe, okanye kumnandi ukuyibiza ngokuthi “i-white pearl virgin”: Xa i-embryo imhlophe ngolu hlobo, siqhubela phambili sikhulisa amakhowa, ngamanye amaxesha iimbumba ezincinci ezindala ziya kuba nombala otyheli ongayi kuthi. kuchaphazela umgangatho, ngokuchaseneyo, ungxamile kakhulu.
2, Ukutyala amakhowa
Khetha indawo yokutyala:
Iindawo zokulima amakhowa kufuneka ziqinisekise le migaqo ilandelayo:
Ukukhanya kwelanga (ukukhanya kwelanga kwahlukile ekukhanyeni).
Kukho ukukhanya (ukukhanya kwendalo kwangaphakathi okanye ukukhanya kwesibane).
Ubuninzi bokufuma (singasebenzisa iitawuli ezimanzi, iibhokisi ze-foam, iminatha ye-orchid, amalaphu … ukuvala indawo engqongileyo ukugcina inqanaba lokufuma ixesha elide).
Coca indawo yokutyala:
Coca indawo apho amakhowa akhoyo ngokutshayela yonke inkunkuma usebenzisa amanzi anesepha ehlanjululweyo kwaye uyihlikihle eludongeni okanye kumgangatho apho amakhowa abekwe khona, yiyeke ihlale imizuzu eyi-15, emva koko ihlanjwe ngamanzi acocekileyo kwaye yome ngokwemvelo. . Oku kuya kunceda ukunciphisa ukungunda okunokubangela izifo zokungunda.
Khetha kwaye uphathe umhlaba ongaphezulu:
Amakhowa anemilenze emide kufuneka agqume umaleko womhlaba ngaphezulu ukugcina umngundo ufumile, ngoko ke kufuneka sigqume ngomaleko womhlaba ongentla, kodwa isigqubuthelo somhlaba kufuneka sisebenzise ezi ntlobo zilandelayo:
Khetha umhlaba wenyama, umhlaba wegadi ongaxubi umgquba wenkomo, i-vermicompost okanye naluphi na uhlobo lwesichumiso.
Kungcono ukhethe umhlaba ngesakhiwo se-pellet. Isityebi kwizinto eziphilayo (Ngokuqhelekileyo zithathwe kwilayisi kunye nokulima imifuno), kunye ne-pH = 7, ubukhulu obuvela kwi-0.3-1cm.
Uwenza njani umhlaba:
Sebenzisa ifosholo ukubetha encinci, sebenzisa i-spatula ene-spokes ezincinci ukuze uyigubungele ngobumnene, ususe amaqhekeza omhlaba ngendlela yamacwecwe kunye nothuli. Intsalela ilingana nokhozo lwerayisi nokhozo lombona.
• Ukuba unenkathalo, unokufukama malunga ne-3% yekalika kangangeentsuku ezimbalwa ukususa iintsholongwane eziyingozi emhlabeni.
*** I-mushroom ivavanya i-Thai POPPER i-pelleted clay, ithiyori lo mhlaba ufanelekile ngokugqibeleleyo, akukho mfuneko yokunqunyulwa kwangaphambili, KODWA KUSEXESHA LOVAVANYO, SO WONKE UMNTU KUFANELE UQAPHELE NGAPHAMBI KOKUZAME.
3. Ukhula njani
Indlela yoku-1: Ukutyala kwiingxowa
* Inyathelo loku-1: Vula umlomo wengxowa ye-embryo, krazula umaleko ongaphezulu we-mycelium endala ukuvuselela amandla okwenza imizimba yeziqhamo, emva koko ugqume ngomaleko womhlaba ocoliweyo malunga ne-2.5-3 cm ubukhulu.
*Inyathelo lesi-2: Bopha umlomo wengxowa njenge-nom, emva kweentsuku ezi-3 ukuze i-mycelium ibuyele, qalisa ukuvula umlomo wesikhwama, sebenzisa imela okanye isikere ukusika iikona ezi-4 zengxowa phantsi kwe-esile kwaye utywine khupha amanzi.
* Inyathelo lesi-3: Qhuba ukunkcenkceshela inkungu, ngokuxhomekeke kwiimeko zemozulu lungisa inani lamaxesha okunkcenkceshela ukuqinisekisa ukuba ukufuma kufikelela kwi-85-95% okanye ngaphezulu, ubushushu beli xesha bumalunga ne-26-33oC. Xa umngundo sele uneziqhamo, umzimba unkcenkceshelwa ngakumbi. Ukususela kumhla wokugquma, malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwe-15, ama-mushroom ama-milky aya kuvelisa imizimba yeziqhamo.
***QAPHELA: MUSA UKUNIKEZELELA KAMANDLA NJENGAMANZI EMIFUNO, MANCEDA KUPHELA UMHLABA. MUSA AMANZI EMHLABENI WE Mushroom. UBUNCINCI obuncinci bokunkcenkceshela UMHLABA wamaMushrooms.
* Inyathelo lesi-4: Vuna amakhowa xa umphetho womnqwazi wekhowa uqalisa ukolula.
Ukususela kumzuzu amakhowa amancinci ahluma ukuya kwixesha lokuvuna, kuthatha iintsuku ezi-5-10.
Xa uvuna, kufuneka ususe yonke imilenze yamakhowa, uqokelele indlebe yomntu omdala we-mushroom, kwaye ushiye iindlebe ezincinci ze-mushroom ukwenzela ukuvuna kamva. Umzimba wesiqhamo ufile kwaye unyawo oludala lwekhowa kufuneka lucocwe.
Emva kokuqokelela amakhowa, kwiintsuku ezi-4 zokuqala, musa ukunkcenkceshela ngokuthe ngqo kwi-mulch, yigcine imanzi ngokunkcenkceshela isiseko kunye nokujikeleza isikhwama samakhowa, ngomhla we-5, qala ukunkcenkceshela i-mulch ukwenza i-wave entsha yamakhowa.
Ama-mushroom ama-Milky angavunwa ngamaxesha angama-3. Isivuno ngasinye sishiyana malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwezingama-20.
Indlela yesi-2: Tyala kwi-tray, gubungela ibhedi
Susa iplastiki kwi-Milky embryo bag (umsuse eze, ungashiyi nto ngasemva)
Lungiselela iingxowa zeembumba ezisondeleleneyo kwitreyi, okanye into oceba ukuyityala kwisikhukukazi.
Khuhla umphezulu kwaye ugqume ngomhlaba uze wenze okufanayo nokukhula kwingxowa yezikhukukazi.
Iintlobo zeetreyi ezikhoyo:
Ibhokisi yeStyrofoam (khumbula ukugqobhoza umngxuma emazantsi ebhokisi)
Itreyi yePlastiki yokukhulisa imifuno inodonga oluphakamileyo kune-embryo bag
Nantoni na enokuthi ibambe i-embryo ngaphakathi kwaye iyigqume ngomhlaba.
Ibhokisi yeStyrofoam enomngxuma:
Itreyi, umngxuma onobude, obuphezulu kunomsebenzi wokusebenzela:
Ukusebenzisa izitena ukwenza iibhedi:
Ezemidlalo, ibhaskithi… nantoni na enokufakwa kwindawo yokusebenza kwaye igqunywe ngomhlaba onemingxuma yokukhupha amanzi, kuquka iziseko zesamente, iiplastiki ezinkulu…
Enkosi kunye nesivuno esihle!
Nấm cổ linh chi có tác dụng điều trị bệnh không ? | Hatgiongtihon.net